Abantu abaningi bakhetha ukusebenzisa ama-countertops we-marble ngenxa yokubukeka kwayo okuhle nezici eziningi ezinhle kakhulu.
Okokuqala, ubulukhuni obuphakeme.Akulula ukusonteka.Imabula yemvelo ukudlula iminyaka emide ukwakheka ngokwemvelo.Ngakho-ke ngokwemvelo iyafana ngesakhiwo sayo. Futhi i-coefficient yokunwetshwa okuncane incane kakhulu, cishe akukho ukucindezeleka kwangaphakathi. Ngakho-ke ubulukhuni bayo buphakeme ngokwedlulele, ekusetshenzisweni kwenqubo ngeke kukhubazeke.
Okwesibili, ukumelana nokugqwala ne-asidi. Imabula yemvelo isakhiwo sayo senhlangano silingana, ngakho-ke akulula ukuzwa ukuguguleka kwe-acid base liquid.Uma ukusetshenziswa futhi kungadingi ukuthi kuncike kwi-besmear ukwenza ngcono ucansi olubushelelezi, ukugcina ukukhuphuka kulula futhi kulula.
Okwesithathu, ukumelana nokugqoka okuphezulu nokumelana nokushisa okuphezulu. Ngoba ubulukhuni bezinto zemabula buphakeme, futhi ukuqina kuhle kakhulu, ngakho-ke ukumelana kwayo nokuqina nakho kunamandla. Akugcini lapho, ukumelana nokushisa okuphezulu nakho kuhle kakhulu. Ngeke kube ukushintsha kwezinga lokushisa nokusonteka. Ekamelweni lokushisa kungagcina izakhiwo zalo zomzimba zangempela.Ngakho impilo yesevisi yinde.
Okwesine, izakhiwo zomzimba ezizinzile. Isakhiwo semabula yemvelo siqaphele futhi siyalingana. Ngisho nasendabeni yomthelela wangaphandle, ngeke i-burr, ukunemba kwendawo ngeke kuthinteke.Ngenxa yokuthi impahla izinzile ngokomzimba, ingaqinisekisa ukuthi akukho ukusilela ngemuva kokusetshenziswa kwesikhathi eside nokulwa nokugqwala, i-antimagnetic, ukwahlukanisa.
Okwesihlanu, akukho magnetization. Impahla yemabula yemvelo noma ngabe isetshenziswe isikhathi eside kangakanani ngeke ivele inamandla, ingahamba kahle.Futhi ayithinteki umswakama.
Ngenxa yalezi zinzuzo, ama-countertops emabula asetshenziswa ngokuya ngokuya ngokwengeziwe, futhi idizayini nayo ihluke kakhulu.Ngaphezu kwamaphakethe we-marble alula, ingahlanganiswa nezinye izinto, ukushayisana kobuhle obuyingqayizivele.